Taariikh-nololeedkii Ibrahim Meygaag - BBC News Somali
Taariikh-nololeedkii Ibrahim Meygaag
Magaalada Hargeysa, xabaalaha qaranka, waxaa lagu aasay Prof Ibraahim Meygaag samatar oo 31kii jenweri ku geeriyooday dalka Japan oo uu Professor ka ahaa jaamicad ku taalla. Taariihk-nololeedkiisii oo kooban, waxa BBC uga warramay Dr Mohamed Abdi Ismail Samatar oo ka tirsan qoyskii uu ka soo jeedey, Allaha u naxariistee, Ibrahim Meygaag.
Ibraahim Meygaag wuxuu ahaa aqoonyahan iyo siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay dawladii somaliya , jabhaddii SNM , iyo Somaliland . waxaa ka qayb galay aaskiisa kumanaan ka tirsan dadweynaha ku nool Hargeysa , kuwaasoo ay ka mid ahaayeen madaxweynaha Somaliland Axmed Siilanyo, golayasha dawlada , xisbiyada , culimada , iyo abwanada.
Ibraahim meygaag wuxuu ku dhashay Hargeysa 1939 . wuxuu waxbarashadiisa ku qaatay Hargeysa , Cammuud iyo Sheekh.
Waxaa loo diray waxbarasho jamicadeed 1962kii , isagoo ka soo qalinjebiyay jamicadda Yeel ee dalka USA .
wuxuu ku soo laabtay Muqdisho oo laga dhigay agaasimaha waaxda miisaaniyadda ee wasaaradda maaliyada .
Sida uu BBC u sheegay Maxamed Cabdi Ismaaciil Samater, oo ka tirsan qoyskii uu ka soo jeedey Ibrahim, waxaa Ibraahim uu noqday wasiirka maaliyadda horaantii todobaatanadkii dawladdii kacaanka ee Maxamed Siyaad Barre, markii danbena madaxdii Xisbigii Hantiwadaaga Kacaanka Somaliyeed XHKS , laakiinse wuu iska casilay.
Waxaa uu noqday horaantii sideetamaadkii Ibraahim Meygaag Safiirkii Somaliya ee Germany. wuu ka goostay dowladdii kacaanka oo wuxuu 1984kii ku biiray jabhaddii SNM Wuxuu noqday gudoomiyihii golaha dhexe ee Jabhaddii SNM ilaa 1991kii markii la riday dawladii Somaliya. 18kii may 1991kii markii lagu dhawaaqay Goonni isu taaga Somaliland wuxuu ibraahim meygaag noqday gudoomiyihii ugu horeeyay ee golihii wakiilada Somaliland oo beelaha wada dega somaliland markaa sameysteen.
1993kii ayaa Ibraahim Meygag dib ugu noqday dibedda gaar ahaan Mareykanka iyo Japan oo uu Professor ka ahaa jamicado, ilaa uu ku geeriyooday Japan 31kii Jenweri 2011.